Dowladda Soomaaliya oo 30 sano ka dib bixinaysa Leesinka Diyaaradaha.
Wasiirka wasaaradda Gaadiidka iyo duulista hawada ee xukumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi salad (Oomaar) ayaa sheegay inla dhameytiray sharciga hay’adda duulista rayidka isla markaan kaliya uu ka harsanyahay xeer hoosaadyo uu leeyahay dhawaana la soo gabagabey doono taasi oo ka dhalan doonto in dowladda Soomaaliyeed ay awood uyeelato diwaan galinta diyaaradaha ka howl-gal dalkeyna iyo bixinta ruqsadaha wadiida diyaaradaha oo ay Soomaaliya bixin muddo sodon sano ku dhaw.
“Laga bilaabo bilaha soo socda waxaan bilaabi doonaa in bixino adeegyada ay u baahanyihiin diyaaradaha sida leesinka iyo diwaan galinta diyaaradaha ay keensadaan ganacsatada Soomaaliyeed oo hore ugeyn jirin dalalka Kenyada iyo itoobiya balse hada ka dib ma dhaceyso waana ku guuleysanayay inaan dhameystirka sharcigi lagu dhaqi lahaa”ayuu ku daray hadalkiisa wasiirka Oomaar.
« Somaliland oo qaaday dhamaan xayiraadihii COVID-19.
Wasaarada waxbarashada Soomaaliya oo soo gaba gabesay Qorista Manhajka Qaranka »